सात कक्षामा पढ्ने किशोरीले बच्चा जन्माइन्, बच्चाको बाबुको बारेमा सोध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै अचम्ममा? – Hamro24News
July 8, 2021 adminLeaveaComment on सात कक्षामा पढ्ने किशोरीले बच्चा जन्माइन्, बच्चाको बाबुको बारेमा सोध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै अचम्ममा?
पछिल्लो समय किशोर किशोरीहरुले गर्ने प्रेमलाई समेत समाजले त्यति कठोर रुपमा लिन छोडेको छ । यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै एक किशोरले आफ्नै सहपाठीसँग सम्बन्ध बनाएका छन् । उनले त्यस्तो कार्य गरेपछि किशोरीको गर्भ मात्रै बसेन, बच्चा समेत जन्मियो । यो घटना भारतको हो । त्यहाँ पश्चिम बंगालमा सात कक्षामा पढ्ने बालिकाले बच्चा जन्माएकी हुन् ।
१३ वर्षीया बालिकालाई ब्ल्याकमेल गरेर सहपाठीले सम्बन्ध बनाएको खुलासा भएको छ । घटनापछि आरोपी सहपाठी आफ्नो परिवारको साथमा बंगादेश भा गे का छन् । आरोपीका हजुरबुवा बंगलादेशमा बस्ने गरेका छन् । पीडितकी आमाले स्थानीय प्रहरी चौकीमा छोरीको नाबालिग सहपाठीविरुद्ध उजुरी गरेकी छन् । उनले छोरीको अ न्त र ङ्ग तस्वीरहरू मोबाइलमा राखेर ब्ल्याक मेल गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
प्रहरीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन आजतकको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ । यस बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान भै रहेको जनाएको छ । अहिले किशोरी र बच्चा संरक्षण केन्द्रमा रहेपनि अब उनीहरुको भविश्य के हुने भन्ने यकिन भै सकेको छैन । मिडिया रिपोर्ट अनुसार बंगलादेश गएका किशोर फर्केर भारत आउने नआउने यकिन छैन ।
आगामी तीन दिन भारी वर्षाकाे संभावना, सतर्क रहन आग्रह
कस्को लापरबाही त ? तीन महिनामा २१ वटा ठूला पुल भत्किदा ।
डुबानको जोखिममा रहेका १७ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो?
जागिर खुल्यो Free Visa कसरी काम पाउने सम्पूर्ण जानकारी इच्छुक ले Hi लेखी पूरा पढेर शेयर गर्नुहोस